ဘက်ထရီပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Apple က iOS 11.0.1 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ကျနော်တို့ရက်ပေါင်းများစွာတိုင်ကြားခဲ့သည် iOS 11 ကို ၀ ိုင်းထားသောဘက်ထရီယိုစီးမှုနှင့် LAG အဆက်မပြတ်ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်ပါအထူးသဖြင့်နှစ် ၆၀ လောက် iPhone 6s လိုမျိုးနောက်ကွယ်မှာရှိနေပြီးသားသောပစ္စည်းတွေမှာ။ Apple သည်ဤနေ့လည်ခင်းများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်ကြားမှုများအားလုံးကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီးကြီးမားသော update အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ operating system တစ်ခုမှာ MB 300 နီးပါးကို update တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် iOS 11.0.1 ၏ cover letter ဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တင်ပြထားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
Cupertino မှလူငယ်များသည်အလျင်အမြန်မြန်ခဲ့ကြပြီးသတင်းစာစာရင်းကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရန်အချိန်ပင်မရှိခဲ့ကြပေ။ ၄ င်းတို့သည် Apple အသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်းအကျဉ်းချုံးပြီး bug fixes များနှင့်အထွေထွေအဆင့်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများကိုသာဖော်ပြခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုတယ်၊ အမှားတစ်ခုပြောရရင် Safari မှာ Keyboard ရှိဖန်သားပြင်အလွတ်များကို iOS အတွက်လုံးဝမသင့်တော်ဘူး၊ စမ်းသပ်နေခဲ့သော်လည်း၊ iOS 11 မှရွှေမာစတာကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်ဒီ update ကအဲဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတိုးတက်စေတာလဲ။ ဘာကြောင့်သုံးနေတာလည်းဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ်။ iPhone 300s ကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုတွင်၎င်းတို့သည် Download MB6MB ရှိသောကြောင့် Apple သည် operating system ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေသည်။ iOS 11.0.1 မည်သို့ဖြေရှင်းသည်ကိုလေ့လာရန်အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်ကြာပါမည်။ အထူးသဖြင့် Apple Watch နှင့် AirPods ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသောသူများ၏နိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်များစတင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖုန်းနီးပါးရှိသည် စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆင်ရေး, အများဆုံးထိုးကျဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ထိခိုက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS 11.0.1 ကိုလွှတ်လိုက်ပြီ
၂၇၈ mb အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ၂၇၈ MB
ရော့ contreras ဟုသူကပြောသည်
Control Center အသစ်တွင် wifi ဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ configuration menu မှအတည်ပြုသည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်ပိတ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ Wifi ဆက်၍ ဆက်သွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အခြားလေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်တွင်သင်လေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်ကိုသင်သတိပြုမိလျှင် - wifi - ဆယ်လူလာဒေတာ - Bluetooth လေကြောင်းကျဆင်းမှုနှင့်အင်တာနက်ဝေမျှခြင်းတို့ကို Apple ကစဉ်းစားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
Rob Contreras အားပြန်ပြောပါ
မှန်ပါသည်၊ WiFi နှင့် Bluetooth ပါသောစင်တာ၊ မိုဘိုင်းဒေတာဖြင့်လေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်ကိုပိတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မဖွင့်ပါ။
Reinardo Andrade ဟုသူကပြောသည်
ငါအတည်ပြု, 15 မိနစ်အကြာငါ 11.0.1 ငါ့အ iPote 6sP နှင့် MY iPad 9.7 P ကို ​​update လုပ်
Reinardo Andrade အားပြန်ပြောပါ
iOS 11 ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုကြိုးစားအသုံးပြုနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သို့သော် lags နှင့် bug များရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်သည် ၁၀.၃.၃ တွင်နေပါမည်။
ဗားရှင်းအသစ်အားလုံးနီးပါးမှာအတူတူပါပဲ၊ ဘက်ထရီပြproblemsနာ၊ ကျွန်တော့်အမြင်မှာအရေးအကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျကို update လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ငါသိသိရန်သိချင်စိတ်ကြောင့်ထိုသို့ပြု, လာမည့် update ကိုသည်အထိပြုလုပ်။ ငါခရီးသွားတော့မယ်၊ ငါ့ဖုန်းကအရမ်းနောက်ကျပြီးဘက်ထရီကအရမ်းနည်းတယ်။
အဆိုပါ update သည် (iTunes အရ) အလေးချိန် 2,59 GB ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း 11.0.1
ကြည့်ကြရအောင် ... iPhone တွေအများကြီး၊ မင်းတို့စာလုံးပေါင်းအနည်းငယ်လိုတယ်။
ဗားရှင်း 11.0.1 ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ FaceTime နှင့်ပုံမှန်စာတိုပို့ခြင်းစသည့်ပြproblemsနာများရှိသည်။ အဆက်အသွယ်များသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်အပိုင်းသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပို့လိုက်သောစာများအားလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ပေါ်လာသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့ပို့သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောစကားဟောင်းကိုရှာရမည်ဖြစ်ပြီးထိုနည်းဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများရေးပြီးပို့နိုင်သည်။ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။ သင့်မှာအဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။
ဘယ်လောက်စုစုပေါင်း ... ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင် ios11 မရှိပါက ၁၀ ခု၏ update သည် ပို၍ လေးပါသည်
၂။ iPhone နာရီ၊ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုသည်သူတို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်အရာမဟုတ်ဘဲ၊ ပန်းသီးလက်ပတ်နာရီ ၂ တွင်လည်းကျွန်ုပ်မပြောသေးပါ၊ သနားစရာပဲ…။
စာရေးသားချိန်၌နှောင့်ယှက်နေသောနောက်ကျကျန်ရစ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသေချာပြင်ဆင်ထားပါကသင်၌ Samsung ဝက်များထဲမှတစ်ကောင်ရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါသလော။ ပေါက်ကွဲနှေးနှေးကွေးသောအရာတို့ကို ... nn
အော်စကာ C. 17 ဟုသူကပြောသည်
ois 11.0.1 ကိုဘယ်လို update မလဲ
အော်စကာ C. 17 ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏အသစ်ပြန်လည် iPhone6တွင်ကီးဘုတ်ချို့ယွင်းချက်များရှိနေသေးသည်
iOS 11 တွင် Music app သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုခံရသူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်သော်လည်းမည်သည့်အဖြေကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ မည်သူမဆိုဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီလော
မင်းကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာ Apple Music မှထွက်လာပြီးသီချင်း ၇၀၀၀ ထပ်မံကူးယူရတော့မှာပါ။ ထို့အပြင်ငါစာရင်းသွင်းခဲ့ကြပါလျှင်အရာနှစ်ခုစွဲချက် generate ။ ဒီဟာရူးနေတယ်
မည်သူမဆို ios 11.0.1 ထက် ios 11 ဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းနည်းပါသလား။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အထင်အမြင်လား၊ တကယ်ဖြစ်လာတာလားမသိဘူး၊ ဒီအရာတွေကြောင့်ဆော့ဗ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တာတွေအများကြီးစဉ်းစားမိတယ်၊ ငါလျှပ်စီးလာတယ်၊ အဲဒါကနည်းနည်းလေးကြာပေမယ့်မသေချာဘူး။
iPhone6မှာ keyboard ကနှေးနေတုန်းပဲ။ အရင်ကလိုမဟုတ်ဘဲဂူဂဲလ်ကနေကီးဘုတ်ကိုကူးယူဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။
ios 11 ထက်တောင်ကြာပါတယ်၊ မနေ့ကငါ ios 11.0.1 ကို install လုပ်ပြီး 10.3.3 ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ ၎င်းသည်သင်စားသောအစာစားခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်းအကြားခြားနားချက်နှင့်တူသည်။ သူတို့ဘယ်လို, မပြီးဆုံးသေးသောထိုကဲ့သို့သောအရာပစ်သလဲ?
ငါ့ရဲ့ iPhone6မှာဘက်ထရီကကုန်သွားပြီးသူ့ဟာသူပိတ်သွားတယ်။ ဒါကမူလ USB ကေဘယ်လ်ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး။ ဒါ့အပြင်တစ်ယောက်ယောက်လည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလား။
အရင် iOS version ကိုဘယ်လိုပြန်သွားလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ iphone6ကို iOS11.0.1 သို့ itunes မှ pc ပေါ်တွင် update လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမပြီးဆုံးပါ။ ကျွန်ုပ်အမှား ၅၃ ရတယ်၊ ဖုန်းကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အဲဒါဟာ recovery mode မှာဖြစ်တယ်။ အခြားမည်သူမဆိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
မနေ့ကကျွန်ုပ် iPhone7ကို iOS 11.0.1 သို့မွမ်းမံခဲ့သည်။ ယခုအခါကျွန်ုပ်သည် App Store မှ WiFi နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆယ်လူလာဒေတာနှင့်သော်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်းများ၏အပ်ဒိတ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မရှိပါ။
iPhone SE တွင်၊ ၁၁.၀.၁ မွမ်းမံမှုသည်ဘက်ထရီပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်အက်ပ်များအားလုံးမွမ်းမံထားပါသည်။
iOs 11.1 mmm …ဘက်ထရီကိုတိုးတက်စေသလား။ ငါဘယ်လောက်များများမသိဘူး 6s အပေါင်းတွင်ပိုကောင်းသောအရာ၊ ဒီစနစ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုပိုမိုအသုံးပြုမှုကြောင့်ငါပိုသုံးဖြုန်းလို့လား။
ငါ့အဘို့ငြင်းခုံမှုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း V / S အသစ်အဆန်း, စနစ်သစ်၏ကြာချိန်နှင့်ကြာချိန်အကြားဖြစ်ပါသည်။
persio lugo Arari ဟုသူကပြောသည်
persio lugo arias အားပြန်ပြောပါ
၎င်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေမည် - 11.0.1 iPad Air2ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ iTunes တွင်၎င်းသည် ၂.၅၉ GB အလေးချိန်ရှိသည်ကိုမှတ်သားသည်။
ငါ 11.0.1 အဆင့်မြှင့်နှင့်အလင်းကဲ့သို့တူဘက်ထရီယိုစီး။ ၁၁.၁ Beta ကိုသုံးပြီးပိုဆိုးလာတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသည်အဘယ်မှာရှိ 11.1 ပြန်သွားပါ။ ဒါအားလုံးတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာပါ။
Hol Chris! ၁၀.၃.၃ ကိုဘယ်လိုပြန်သွားနိုင်ပါသလဲ။ ငါ 10.3.3 အကြောင်းကိုဘာမှမသိချင်ကြဘူး
ပြီးခဲ့သည့်ညက Iphone 11.0.1 အသစ်ကိုကျွန်ုပ်၏ iPhone6တွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက်တွင် "slide to off" ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုပယ်ဖျက်ရန်နှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှ စ၍ ပေးသည်။ ငါဖုန်းကိုသုံးလို့မရဘူး။ ငါကားမောင်းနေစဉ် Google မြေပုံကို gps ထည့်ပြီးအတူတူပါပဲ၊ အမည်းရောင်နဲ့“ slide to off” စာသားဟာအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ပုံကိုမမြင်ရရင်တောင်ကြားနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါကပိတ်ထားပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်ငါကဖုန်မှုန့်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ငါသိ၏, ညာဘက်အခြမ်းသော့ခလုတ် brush ပါပြီသို့မဟုတ်ငါအိမ်မှာခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ, သူကမျက်နှာပြင်များအချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ငါအပူတပြင်းပါပဲ !!
တစ်ယောက်ယောက်ကဒီဟာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲပြောပြနိုင်မလား ?? ပြီးခဲ့သည့်ညတိုင်အောင်အရာအားလုံးသည်ကြီးလှ၏။
ကျွန်ုပ်ထင်သောပြproblemနာသည် home ခလုတ်ထက်ပိုပါသည်၊ ၎င်းသည်ဖိထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ power ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါသင်ကိုဖမ်းယူသည်။
ios 11.1.1 ယခုငါထည့်ပြီး၎င်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော shit၊ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါမသိဘူး၊ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၊ စာတိုပို့နေသည့်အချိန်၊ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်စာသားကိုမဆိုရေးသားသောအခါမိုဘိုင်းသည်လုံးဝမူးဝြေခင်းဖြစ်သည်။ wifi အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအိုင်ပက်နှင့်အခြားအရာများကိုယူပါ။